Duullimaadyada Istanbul-Sofia Express ayaa bilaabanaya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDuulimaadyada Istanbul-Sofia Express ayaa bilaabanaya
20 / 02 / 2017 34 Istanbul, 35 Bulgaariya, YURUB, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
duulimaadyo Istanbul-Sofia Express bilaabo: Gaadiidka, Wasiirka Arrimaha iyo Communications Maritime Ahmet Arslan, ayaa sheegay in war qoraal ah oo, shaqada dayactirka ee 292 ka kiiloomitir ee line dhererka tareenka Kapıkule-Istanbul la dhamaystiro, ayuu yiri.
Halkalı- Xusuuso in tareenka rakaabka ee u dhexeeya Istanbul iyo Istanbul ay bilaabeen inay shaqeeyaan sannadkii hore, Arslan ayaa sheegay in Bulgaria / Sofia-Istanbul /Halkalı 20 ayaa ku dhawaaqday in tareen cusub oo la yiraahdo Istanbul-Sofia Express ay bilaabi doonto duulimaadkeeda bisha Febraayo.
Arslan, waxaa bixiya kuwaas oo gaar ah wada shaqeeya maalin kasta inta u dhaxaysa gaadiidka rakaabka ee u dhexeeya dalalka Yurub iyo Turkey oo ay bixiso u-Istanbul Bucharest fiiqaya Express, ayuu yiri:
N Iyadoo la cusbooneysiiyay wadada dayactirka waddada Thrace, 3 waxay ku qasbey basaska u dhexeeya Istanbul iyo Kapikule sida Juun 2014. Wareejintaas looma baahna. Dib-u-hagaajinta waddada ayaa ka shaqeysa wadada tareenka ee Kapikuure-Istanbul waa la dhammeystiray, waddaduna waa ay dhalaalaysaa. Heshiis ayaa lagu saxiixay Tareenka Bulshada ee Bulgaariya iyo TCDD waxaana la go'aamiyay in ay bilaabaan tareen cusub. Istanbul-Sofia Express, Sofia-Halkalı Taxanaha tareenka wuxuu ka kooban yahay wadarta afar tayadood oo tayo sare leh, oo ay ka mid yihiin labada baabuur ee sariirta ee shirkadda gaadiidka ee TCDD, hal xawaare iyo hal xabbadood oo ka mid ah gawaarida Bulshada ee Bulgaria.
Sidoo kale Belgrade iyo Bucharest ayaa la bixin doonaa
Arslan wuxuu warbixin ka siiyey Isticmaalka Istanbul-Sofia Express oo isku xirta wiishyada si uu u bixiyo Istanbul-Belgrade iyo isku xirka Istanbul-Bucharest xagaaga. HalkalıSaacadaha 22.40, Sofia wuxuu u guuri doonaa 21.00, waqtiga safarka wuxuu noqon doonaa saacadaha 9 saacadaha 50, ayuu yiri.
Saldhigga Medina High Speed ​​Train Station waxaa dhisey Xarun Xarun
Malaayiin qof ayaa ku safraya tareenka xawaaraha sare